रित्तो खल्ती बोकेर यात्रामा निस्केको छु « Jana Aastha News Online
प्रकाशित मिति : ६ बैशाख २०७९, मंगलवार २०:००
सन्त कविरले कतै भनेका थिए ‘सबसे बडा है रोग, क्या कहेंगे लोक’ अर्थात् दुनियाँको सबैभन्दा ठूलो रोग नै दुनियाँले के भन्लान् भन्ने सोच हो । म दुनियाँको कुरा होइन आफ्नै अन्तरमनको आवाज सुन्छु र त्यही ढंगले जीवनको रथ अगाडि बढाइरहेको छु ।
एक/दुई पटक मात्र होइन २१ पटकसम्म असफलताले पच्छाइरहेको मान्छे हुँ । लोकसेवामा पटक–पटक असफलता झेल्दा पनि प्रयास जारी राखें, आशा–विश्वास र आफैंप्रति भरोशा पनि थियो एकपटक अवश्य सफल हुनेछु । त्यही कारण त मोडिन जीवनको बाटो, बरु दोब्बर पारें मेहनतलाई ।
निरन्तरको प्रयास, आँट, धैर्यताका कारण हुनुपर्छ २२ औं प्रयासमा लोकसेवाबाट अधिकृतमा नाम निकाल्न सफल भएँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा नाम निकाल्न सफल भएलगत्तै गत कात्तिक ३० गते कालीगण्डकी ए जलविद्युत आयोजनाको प्रशासन प्रमुखमा पदस्थापन भयो । मंसिर १ बाट हाजिर भएँ मुलुकको ठूलो जलविद्युत् परियोजनामा ।
सरकारी सेवामा स्थायी नियुक्ति लिएको वा अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेको ४ महिना २४ दिनमै विश्राम लिने निर्णयमा पुगेँ । अधिकृत पदबाट राजीनामा ठोकें, यद्यपि राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छैन । कार्यालय प्रमुख काठमाडौंमा हुनुहुन्छ, उहाँ आज (चैत ३० ) फर्कनुभएपछि राजीनामा स्वीकृत हुने जानकारीसम्म पाएको छु ।
जिते जनताकाे सपना साकार पारिन्छ हारे कमाएर खान सकिन्छ भनेरै राजीनामा दिएकाे हुँ । कि फूल बनेर फक्रन्छु वा त वासना छरेर सिद्धिन्छु ।
२२ औं प्रयासमा अधिकृततर्फ नाम निकाल्न सफल भएको व्यक्तिले यति छिट्टै किन राजीनामा दिएको भनेर प्रश्न गर्नेहरू छन् । फोनमा, भेटमा धेरैको यही जिज्ञाशा छ । यसरी सरकारी जागिरबाट राजीनामै दिनु थियो भने लोकसेवा किन भिडिरहेको थिइस् ? बौलाइस् कि के हो भनेर प्रश्न तेस्र्याउनेहरू पनि नभएका होइनन् ।
जीवनमा सहज र सजिलो बाटो त जो पनि हिँड्छ/हिँडिरहेकै छ । म भने अप्ठ्यारा बाटोमा हिँड्न रमाउँछु । देश परिवर्तन गर्न युवाहरूले असहज र नयाँ बाटो हिँड्नै पर्छ । सजिलो बाटो हिँडेर पुगिने भनेको उही पुरानै ठाउँमा हो । मैले जीवनमा जहिले पनि फरक बाटो हिँड्न चाहेँ वा रुचाएँ । ऊर्जाशील ९ वर्षको मिहिनेतले २२ औं प्रयासमा अधिकृत बन्न सफल भएको हुँ ।
निजामती अस्पतालमा करार सेवामा लामो समय काम गरेँ । ०६९ सालदेखि खुलेका जति र भ्याएसम्म अधिकृतका सबै फाराम भरेँ । लगातार ९ वर्षसम्म विभिन्न संस्थान र निकायमा परीक्षा दिएँ । कर्मचारी सञ्चयकोष, कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेड, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, वायुसेवा निगम, काठमाडौं महानगरपालिका, पर्यटन बोर्ड, कर्मचारी सञ्चयकोष, खाद्य संस्थान, गुठी संस्थानसम्म खुलेका जति विज्ञापन कुनै बाँकी राखिन, भ्याएसम्म सबै भिडेँ । ती अधिकांश परीक्षामा प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण हुन्थें अनि दोस्रो चरणमा सधैँ फेल ।
सबथोक खानु तर हरेश नखानु भन्छन् अर्थात् जीवनमा खान नहुने चिज हरेश हो भन्ने वाक्यलाई मूल मन्त्र मानेँ । र, त खुलेजति परीक्षामा भिडिरहें र नौ वर्षपछि दिन फिरेको थियो । महिनाको झण्डै १ लाखबराबर तलब, भत्ता र सुविधा थिएँ । जीवन त गज्जबको थियो । तर, मेरोजस्तै गज्जबको जीवन सर्वसाधारण नेपालीहरूको छ त ? यो प्रश्नले चिमोटिरहन्थ्यो । नेपालमा प्रशासनलाई पनि गाइड गर्छ राजनीतिले । त्यसैले प्रशासक बन्न छाडेर मेरो पाइला राजनीतितिर मोडिएको छ ।
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा बनेपा नगरपालिकाबाट मेयर पदमा लड्ने उद्देश्यले सरकारी जागिरबाट राजीनामा ठोकेको हुँ । आफ्ना लागि मात्रै गाँस, बास, कपासको जोहो त साधारण मान्छेले पनि गर्दछ । पशुले गाँस आफैं जुटाउँछ । जागिरले मेरो सुविधा पुगेको छ । सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गराएको छ ।
म चाहन्छु सबैले सरकारी जागिरेको झैं सुरक्षित जीवन महसुस गर्न सकुन् । बनेपामा जन्मिएँ, हुर्किएँ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म अध्ययनको अनुभव सुखदै रह्यो । सानैदेखि या त प्रशासन कि त राजनीतिमा होमिन्छु र सामाजिक सेवा गर्छु भन्ने थियो । स्थानीय तह यो देशका जग हुन् । बलियो जगले नै घर बलियो बन्ने हो । हिजो परिवर्तनकै लागि लोकसेवा लडेको थिएँ । जतिखेर स्थानीय तह कर्मचारीले चलाउँथे ।
०७४ को स्थानीय निर्वाचनपछि ती तहका कमाण्डर जनप्रतिनिधि बन्न थाले । मेरो सपना र चाहना भनेको बनेपा बदल्ने हो । त्यसका लागि एक जना कर्मचारीभन्दा जनप्रतिनिधिले धेरै ठूलो प्रभाव पार्नसक्छ भन्ने बुझेरै सुरक्षित जागिर छाडेर राजनीतिमा लाग्ने अठोट गरेको हुँ । जोखिम मोलेको छु ।
यो जोखिमपूर्ण बाटो हिँडेर नयाँ ठाउँ, नयाँ गन्तव्य पुग्ने तयारी आजको होइन धेरै वर्षअगाडिको हो । घर परिवारसँग सल्लाह गरें, आफ्नो सपना नमार्नुस् भन्ने सल्लाह र हौसला मिलेपछि यात्रा मोडिएको हो । सपनालाई मारेर मन नलागीनलागी सरकारी जागिर खाएँ भने राम्रो गर्न सक्दिनँ र समयमा निर्णय पनि गर्न सक्दिनँ ।
जीवनभर यसमा खास मज्जा आउँदैन । अहिले उम्मेदवारी दिँदै गर्दा एउटा प्रयास त गरेको हो नि भन्ने त हुन्छ नि ! जिते जनताको सपना साकार पारिन्छ हारे कमाएर खान सकिन्छ, पेट पाल्न सकिन्छ भनेरै राजीनामा दिएको हुँ । अब फर्कने कुरै छैन ! कि फूल बनेर फक्रन्छु वा त वासना छरेर सिद्धिन्छु ।
बनेपा बदल्नका लागि एक अवसर, एकपटकको लागि मात्र । म आफू पनि लिन चाहन्छु । बनेपावासी जनताका लागि पनि दिन चाहन्छु । इमान्दारीले कमाएको पैसा कसैले पनि फजुल खर्च गर्न सक्दैन । फेरि उम्मेदवार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा समाजलाई सिकाउनु पनि त छ । मसँग प्रचार प्रसार गर्ने पैसा छैन । रित्तो खल्ती बोकेर चुनाव लड्न निस्केको छु ।
– कञ्चनराज गिरी